Bit By Bit - tijaabo Orodka - 4.4 Ka gudubka tijaabo fudud
Aynu ka baxno tijaabooyinka sahlan. Saddex fikradood ayaa faa'iido u leh tijaabooyinka hodanka ah: ansaxnimada, sinnaanta saameynta daaweynta, iyo hababka.
Cilmi-baarayaasha ku cusub tijaabooyinka badanaa waxay diiradda saaraan su'aal gaar ah oo cidhiidhi ah: Daaweyntu ma "shaqeyn"? Tusaale ahaan, wicitaan taleefan oo ka socda tabaruce ma ku dhiirigeliyaan qof inuu cod bixiyo? Miyuu bedelayaa barta internetka ee buluuga illaa cagaaran si loo kordhiyo qiimaha riixitaanka? Nasiib darro, ereyada dabacsan ee ku saabsan waxa "shaqeynaya" waxay diidaan xaqiiqda ah in tijaabooyinka xoogga culus ee dhabta ah aysan kuu sheegin haddii daaweyntu "ka shaqeyso" guud ahaan. Taas beddelkeeda, tijaabooyinka diirada saara waxay ka jawaabayaan su'aal gaar ah oo dheeri ah: Waa maxay saameynta celceliska ee daaweyntan gaarka ahi iyada oo la adeegsanayo hirgalinta gaarka ah ee dadkan ka qaybgalayaasha waqtigan? Waxaan soo wici doonaa tijaabooyinka diirada saaraya su'aalahan cidhiidhiga ah ee sahlan .
Dhibaatooyinka sahlan waxay ku siin karaan macluumaad qiimo leh, laakiin waxay ku fashileen inay ka jawaabaan su'aalo badan oo ah labadaba muhiim ah oo xiiso leh, sida haddii ay jiraan dad ka mid ah dadka daaweyntu ay saameyn weyn ku yeesheen; haddii ay jirto daaweyn kale oo waxtar leh; iyo in tijaabadani ay la xiriirto aragti bulsheed oo ballaaran.
Si loo muujiyo qiimaha ka baxsan tijaabooyinka sahlan ee fudud, aynu ka fikirno tijaabada analogga ah ee P. Wesley Schultz iyo asxaabteeda xidhiidhka ka dhexeeya caadooyinka bulshada iyo isticmaalka tamarta (Schultz et al. 2007) . Schultz iyo asxaabtaydu waxay xannaaneeyeen 300 oo qoys oo ku yaal San Marcos, California, kuwaa oo doorbidyadoodu waxay bixiyeen farriimo kala duwan oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ilaalinta tamarta. Ka dib, Schultz iyo asxaabtooyu waxay qiyaaseen saameynta farriintan ku saabsan isticmaalka korontada, labadaba hal toddobaad kadib iyo saddex toddobaad kadib; fiiri jaantuska 4.3 ee sharaxaadda faahfaahsan ee naqshadaynta tijaabada ah.
Jaantuska 4.3: Mabaadi'da qaabka tijaabada ah ee Schultz et al. (2007) . Imtixaanka goobta wuxuu ku lug lahaa ku dhawaad ​​300 qoys oo ku yaal San Marcos, Kaliforniya shan jeer muddo siddeed toddobaad ah. Booqashada kasta, cilmi-baarayaashu waxay gacanta ku qabsadeen akhris ka yimid mitirka guriga. Laba ka mid ah booqashooyinka, waxay xayeysiisey guri walba oo bixinaya macluumaad ku saabsan isticmaalka tamarta qoyska. Su'aasha cilmi-baarista waxay ahayd sida ay ufilan tahay fariimahani waxay saameyn ku yeelanayaan isticmaalka tamarta
Tijaabadu waxay lahayd laba xaaladood. Markii hore, qoysaska waxay heleen talooyin guud oo tamarta lagu kaydiyo (tusaale ahaan, isticmaal taageerayaasha halkii ay ku xirnaan lahaayeen hawo-qabayaasha) iyo macluumaadka ku saabsan isticmaalka tamarta marka loo eego celceliska isticmaalka tamarta ee xaafadooda. Schultz iyo saaxiibadaa ayaa ugu yeeray xaaladdan qeexan sababtoo ah macluumaadka ku saabsan isticmaalka tamarta ee xaafadda waxay bixisay macluumaad ku saabsan dabeecada caadiga ah (sida, sharraxaadda). Markii Schultz iyo saaxiibadeed ay eegeen isticmaalka korantada ee tamarta this kooxdan, daaweynta ayaa u muuqday inaan wax saameyn ah lahayn, midba midka gaaban ama waqti dheer; Si kale haddii loo dhigo, daaweyntu uma muuqato "shaqo" (sawirka 4.4).
Nasiib wanaag, Schultz iyo asxaabtoodu ma aysan dejinin falanqayntan fudud ee fudud. Intaan la bilaabin tijaabinta, waxay ku doodeen in dadka isticmaala culeyska korontada ay ka sarreeyaan celceliska - inay yareyn karaan isticmaalkooda, iyo kuwa isticmaala iftiinka korontada-dadka ayaa ka hooseeya celceliska - waxa laga yaabo inay kordhiyaan isticmaalka. Marka ay fiiriyeen xogta, taasi waa sida ay u arkaan (sawirka 4.4). Sidaa daraadeed, waxa u muuqday sida daaweyn aan saameyn lahayn waxay ahayd daaweyn ah oo leh laba saameyn oo waxyeello ah. Korodhka korodhka ah ee dadka isticmaala iftiinka ayaa tusaale u ah saamaynta boomerang , halkaas oo daaweyntu ay saameyn ku yeelan karto waxa looga jeedo.
Jaantus 4.4: Natiijooyinka ka soo baxay Schultz et al. (2007) . Guddi (a) ayaa muujinaya in daaweynta xeerka qeexan ay leedahay saameyn daaweyn celcelis oo celcelis ah. Hase yeeshee, guddi (b) ayaa muujinaya in saameynta daaweyntan celcelis ahaan ay ka kooban tahay laba saameyn oo waxyeelleyn ah. Isticmaalayaasha culus, daaweynta ayaa yareysay isticmaalka, laakiin dadka isticmaala iftiinka, daaweynta ayaa kordhisay isticmaalka. Ugu dambeyn, guddi (c) waxay muujinaysaa in daaweyn labaad, oo isticmaashay caadooyinka sharraxaadda iyo caddaalad darrada, ay si qumman u saameeyeen dadka isticmaala culeyska laakiin waxay yareeyeen saamaynta boomerang ee isticmaalayaasha fudud. Waxaa laga soo qaatay Schultz et al. (2007) .
Si isku mid ah xaaladda koowaad, Schultz iyo asxaabtuba waxay sidoo kale xaalad labaad ka soo baxeen. Qoysaska ku jira xaalad labaad waxay heleen talooyin isku mid ah oo daaweyn ah oo guud iyo macluumaad ku saabsan isticmaalka tamarta ee qoyskooda marka la barbardhigo celceliska xaafadda - oo leh hal ilbiriqsiyo yar yar: dadka qaba sicir-dhimista, cilmi-baarayaashu waxay raaciyeen: ) oo loogu talagalay dadka isticmaala kor u-dhaafka ah waxay ku dareen: (Aragti muxaadarooyin ah ayaa loogu talagalay inay kiciyaan waxa ay cilmi-baarayaashu ugu yeeraan caadooyinka caqli-gal ah. waxa badanaa la qabtaa (Reno, Cialdini, and Kallgren 1993) .
Marka lagu daro mid ka mid ah qoraallada yaryar, cilmi-baarayaashu waxay si wayn hoos ugu dhigeen saamaynta boomerang (sawirka 4.4). Sidaa daraadeed, adoo samaynaya isbeddel sahlan - isbeddel lagu sameeyey aragtida cilmi nafsiyeed ee cilmu-nafsiga (Cialdini, Kallgren, and Reno 1991) - cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay soo rogaan barnaamij aan u muuqan in ay ka shaqeeyaan mid ka shaqeeyay, iyo, isla mar ahaanteed, waxay awoodeen inay gacan ka geystaan ​​fahamka guud ee sida caadada bulshadu u saameeyso dhaqanka aadanaha.
Hase yeeshee, markaa, waxaad ogaan kartaa in wax yar ay ka duwan tahay tijaabadan. Gaar ahaan, tijaabinta Schultz iyo asxaabtu run ahaantii ma laha koox la xakameynayo si la mid ah natiijooyinka tijaabada ah ee la tijaabiyay. Isbarbardhigga u dhexeeya naqshadeynta iyo dib u eegista Dib u eegista iyo van de Rijt waxay muujinaysaa faraqa u dhexeeya labo naqshadood oo waaweyn. Maaddooyinka u dhexeeya maaddooyinka u dhexeeya , sida ka mid ah Restivo iyo van de Rijt, waxaa jira koox daaweyn ah iyo kooxda kantaroolka. Mawduucyada dhexdooda gudahooda , dhinaca kale, habdhaqanka ka qaybgalayaasha ayaa la barbardhigayaa kahor iyo kadib daaweynta (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . Dhibaatada gudaheeda waxaa loola jeedaa haddii qof kasta oo ka qaybgalaya uu u dhaqmo koox ahaan. Xoogga u dhexeeya maaddooyinka u dhexeeya moodooyinka ayaa ah inay bixiyaan difaac ka dhan ah kuwa isku kalsoon (sida aan hore u sharraxay), halka xoogga maadooyinka guduhu ay kordhinayaan qiyaasta qiyaasaha. Ugu dambeyntii, si aad u aragto fikrad ah in marka dambe la yimaado marka aan ku deeqo talo ku saabsan qaabeynta tijaabooyinka casriga ah, naqshadeynta qaab-dhismeedka ah ee ku saleysan habka wanaagsan ee maaddooyinka gudaha iyo ilaalinta ka hortagga maaraynta maaddooyinka u dhexeeya (shaxda 4.5).
Jaantuska 4.5: Saddex sawir oo tijaabo ah. Istaraatiijiyada la xakameeyey ee la xaddiday ayaa u isticmaala u dhexeeya maadooyinka maadooyinka . Tusaale u dhexeeya maaddooyinka u dhexeeya dib u eegista waxaa ka mid ah Restivo iyo van de Rijt (2012) tijaabooyinka barnstars iyo wax ku biirinta ee Wikipedia: cilmi-baarayaashu waxay si aan kala-sooc lahayn uga qaybgalayaashu u qaybiyeen daaweynta iyo kooxaha xakamaynta, waxay ka qaybgalayaashu ka qaybqaataan kooxda daaweynta barnstar, marka la barbar dhigo natiijooyinka laba kooxood. Nooca labaad ee naqshadeynta waa naqshad gudaha ah. Labada tijaabo ee Schultz iyo saaxiibada (2007) daraasad ku sameeyaan caadooyinka bulsheed iyo isticmaalka tamarta oo muujinaya maaddooyinka ku jira maaddooyinka: cilmi baarayaashu waxay barbar dhigeen isticmaalka korontada ee ka-qaybgalayaasha kahor iyo kadib marka daaweynta la qaato. Naqshadaha maaddooyinka ku jira waxay bixiyaan saxaarada tirakoobka, laakin waxay u furan yihiin dhibaatooyinka suurtagalka ah (tusaale ahaan, isbeddelka cimilada u dhexeeya mudnaanta daaweynta iyo daaweynta) (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . Naqshadaha maaddooyinka dhexdooda ah waxaa sidoo kale loo yaqaan mararka qaarkood naqshadaynta naqshadeynta. Ugu dambeyntii, naqshadaha isku dhafan waxay isku daraan taxadarka hagaajinta ee maaddooyinka gudaha iyo ilaalinta ka soo horjeeda maaddooyinka u dhexeeya maaddooyinka u dhexeeya. Naqshad isku dhafan, cilmi baaris ayaa isbarbardhigaya isbeddelka natiijooyinka ka soo baxa dadka ku jira kooxaha daaweynta iyo kontoroolka. Marka cilmi-baarayaashu hore u haystaan ​​macluumaadka daaweynta kahor, sida kiisaska tijaabooyin badan oo dijital ah, naqshado isku dhafan ayaa guud ahaan loo doorbidayaa maaddooyinka u dhexeeya maaddooyinka sababtoo ah waxay keenayaan in la hagaajiyo qiyaasta saxda ah.
Guud ahaan, naqshadeynta iyo natiijooyinka daraasadda Schultz iyo saaxiibada (2007) muujinayaan qiimaha ka baxsan tijaabooyinka sahlan. Nasiib wanaag, uma baahnid inaad noqoto mid hal abuur leh si loo qorsheeyo tijaabooyinka sidaan oo kale ah. Cilmi-baarayaasha bulshada waxay sameeyeen saddex fikradood oo kugu hagaya tijaabooyin isku dheelitiran: (1) ansax ah, (2) heterogaanta ee saameynta daaweynta, iyo (3) qaababka. Taasi waa, haddii aad saddexda fikradaha maskaxda ku hayso intaad qorsheynayso tijaabadaada, waxaad si dabiici ah u abuuri doontaa tijaabo aad u xiiso badan oo faa'iido leh. Si aan u muujinno saddexda figraan ee ficilka, waxaan ku sharxi doonaa tiro tijaabo ah oo tijaabin ah oo tijaabo ah oo ku dhisan naqshadda naqshadeynta iyo natiijooyinka cajiibka ah ee Schultz iyo asxaabta (2007) . Sida aad u arki doonto, iyada oo loo marayo naqshad taxaddar leh, fulinta, falanqaynta, iyo tarjumaadda, waxaad sidoo kale aad uga dhaqaaqi kartaa wixii ka baxsan tijaabooyinka fudud.